उच्च ओहदामा हुनेहरुले जानीनजानी अंग्रेजी नै बोल्नुपर्ने किन ? - AmsancharAmsanchar
उच्च ओहदामा हुनेहरुले जानीनजानी अंग्रेजी नै बोल्नुपर्ने किन ?
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने आयोजनामा गरेको लगानी सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ । चैत १५ र १६ गरी दुई दिनसम्म आयोजित लगानी सम्मेलन समापन भए पनि त्यसमा सहभागी मन्त्रीहरुको प्रस्तुति अहिले पनि चर्चामा छन् ।
नेपाली भिआइपीले जानीनजानी अंग्रेजी बोल्ने क्रममा कमजोर प्रस्तुति दिएको यो पहिलो घटना भने होइन । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुन जाँदा उच्च ओहदामा हुनेहरुबाट यस्ता गल्ती धेरैपटक दोहोरिएका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।